Sida loo hubiyo Liiska Diiwaanka Deegaankaaga | Martech Zone
Buugaagta deegaanka waxay duco iyo habaar ugu noqon karaan ganacsiyada. Waxaa jira saddex sababood oo muhiim ah oo ah in fiiro gaar ah loo yeesho tusayaasha deegaanka:
Muuqaalka Khariidadda SERP - shirkaduhu badanaa ma ogaadaan in ganacsi iyo degel lahaanshuhu uusan daruuri kaa dhigeynin inaad ka muuqato bogagga natiijada mashiinka raadinta. Meheraddaadu waa inay ku taxan tahay Ganacsiga Google si aad aragti uga hesho qaybta khariidada bogga natiijada mashiinka raadinta (SERP).
Qiimeynta Noolaha - tusmooyin badan ayaa ku fiican in lagu qoro si loo dhiso qiimeynta guud ee boggaaga iyo muuqaalka (ka baxsan Khariidadda).
Gudbinta Tusaha - macaamiisha iyo ganacsatadu waxay adeegsadaan tusayaal si ay uga helaan dukaamada tafaariiqda, makhaayadaha, adeeg bixiyaasha, iwm.
Diiwaanada Degaanka Markasta Ma Fiicna
In kasta oo ay faa iidooyin ku leeyihiin buuggaagyada maxalliga ah, had iyo jeer maahan istiraatiijiyad weyn. Waa kuwan qaar ka mid dhibaatooyinka ka jira liistada deegaanka:
Iibinta Weerarka ah - Diiwaanada maxaliga ah badanaa waxay ku helaan lacagtooda adiga oo kaa dhigaya liisaska mudnaanta leh, xayeysiiska, adeegyada, iyo dallacaadaha. Badanaa maahan, qandaraasyadan waa kuwo waqti dheer soconaya oo aan lahayn qiyaaso wax qabad oo la xiriira. Marka, inkasta oo ay u egtahay fikrad weyn in lagusoo qoro asxaabtaada no haddii qofna uusan booqanayn tusahooda, ma caawinayso ganacsigaaga.
Tusaha ayaa kula tartamaya ADIGA - Diiwaanada deegaanka waxay leeyihiin miisaaniyado aad u tiro badan waxayna runti kula tartamayaan si dabiici ah. Tusaale ahaan, haddii aad tahay roofer maxalli ah, tusaha liistada maxalliga ah ee saqafyada ayaa si adag uga shaqeyn doona inuu ka sarreeyo websaydhkaaga. Maaha in la xuso waxay kuu soo bandhigayaan tartamadaaga oo dhan adiga.
Tusaha qaarkood ayaa ku dhaawici doona - Nidaamyada qaarkood waxaa ka buuxa malaayiin galitaanno ah spam, malware, iyo degello aan habboonayn. Haddii boggaaga uu ku xiran yahay bogaggaas, dhab ahaantii wuu dhaawici karaa qiimeyntaada adiga oo kugula jaan qaadaya bogaggaas.
Adeegyada Maareynta Tusaha Deegaanka
Sida dhibaato kasta oo suuqgeyn ah halkaas, waxaa jira meel lagu caawiyo milkiilayaasha ganacsiga ama wakaaladaha suuqgeynta maareeya liisaskooda. Shakhsi ahaan, waxaan kugula talinayaa in shirkadaha ay si toos ah ugu maareeyaan koontadooda Google Business iyagoo adeegsanaya barnaamijka mobilada Google Business - waa hab fiican oo lagula wadaagi karo loona cusbooneysiin karo dalabyadaada maxalliga ah, loo wadaagi karo sawirrada, loolana xiriiri karo booqdayaasha SERP.
Semrush waa barta aan ugu jeclahay baaritaanka iyo kormeerka aragtida mashiinka raadinta macaamiishayda. Haatan waxay ku balaariyeen waxa ay bixinayaan liisaska maxalliga ah oo cusub qalabka maaraynta liisaska!
Hubi Muuqaalka Liisaska Maxalliga ah
Waxa ugu horreeya ee aad sameyn karto waa inaad hubiso liisaskaaga. Gali waddanka, magaca ganacsiga, cinwaanka waddada, nambarka nambarka, iyo lambarka taleefanka ganacsigaaga:
Semrush wuxuu si otomaatig ah kuu siinayaa liis ay ku qoran yihiin tusayaal aad u awood badan oo ay la socdaan sida ugu fiican ee loo soo bandhigo liiskaaga Natiijooyinka waxay ku kala baxaan natiijooyinka:
bandhigaan - adigu waxaad joogtaa diiwaanka liiska deegaankaaga iyo cinwaankaaga iyo lambarka taleefankaagu waa sax.
Iyada oo Arrimaha - waxaad kujirtaa diiwaanka liistada maxalliga ah laakiin waxaa jira arrin cinwaanka ama lambarka taleefanka ah.
Ma joogo - ma joogtid liistadaas liis garaynta ah ee maxalliga ah.
aheyn - diiwaanka su'aashu ka taagan tahay ma suuragalin in la helo.
Haddii aad gujiso Ku faafi macluumaadka, waxaad bixin kartaa lacag bille ah, iyo Xeebaha ka dib ayaa diiwaangelin doonta gelitaanka liistada uusan ka muuqan, cusbooneysiinta gelitaanka ay ku sameyso meesha aysan jirin wax gelitaan ah oo jira, oo sii wad inaad cusbooneysiiso liistada bil kasta.
Tilmaamo Dheeraad ah Xeebaha Liisaska maxalliga ah
Khariidadda Khariidadda Google - Fiiri sida saxda ah ee aad uga soo muuqato natiijooyinka Khariidadda Google meelaha si toos ah ugu xeeran meheraddaada. Waqti ka dib, waxaad la socon kartaa sida ugu wanaagsan ee aad u horumarisay.
Dhiirrigelinta Codka Raadinta - Dadku waxay ku raadinayaan codkooda hadda sidii hore. Xeebaha wuxuu hubiyaa in liisaskaaga ay ku habboon yihiin weydiimaha codka.
Raad-raac oo ka jawaab Dib-u-eegista - Arag dib-u-eegis kasta oo meheraddaada ah oo qaado tallaabooyin waqtigeeda ku habboon si aad u ilaaliso sumcaddaada ganacsi adoo ka jawaabaya Facebook iyo Google Business.
Maamul Soo-jeedimaha Isticmaalaha - Eeg isbeddelada ku jira liisaskaaga ee ay soo jeediyeen isticmaaleyaashu oo ansaxi ama diido.
Raadi oo Ka saar Ganacsiyada Been Abuurka ah - Waxaa jiri kara khaa'inno magaca ganacsiga wata oo aad adigu ku leedahay shabakadda. Hagaaji arrimaha la xiriira!
Hubi Liiskaaga Deegaanka
Shaacinta: Waxaan xiriir la leenahay Liistooyinka Maxaliga ah ee Semrush
Tags: Tilmaamaha ganacsigahubi buugga deegaankahubi liisaska maxalliga ahliistada deegaankaraadinta maxalliga ahqiimeynta raadinta deegaankamaxalliga ah